ဘ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
ဘာမှမသိ။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
ဘာလာလာ။ ရေး - အရိုး။ ဆို - Big Bag စီးရီး - ဘာလာလာ။
ဘာသီးလဲ။ ရေး - ယူရီဂါ။ ဆို - ကောင်းထိုက်။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
ဘုရားဝတ်ပြု။ ရေး - ကိုလေးလွင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
ဘယ်တော့မှ။ ရေး- တေဇမင်းဂေါင်။ ဆို - ပန်းငုံ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
ဘယ်တော့မှမရှုံး။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။